मेलम्ची आयोजना अब कता ? मन्त्रालय के भन्छ ? | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
मेलम्ची आयोजना अब कता ? मन्त्रालय के भन्छ ?
माघ २८, २०७५ सोमबार १७:१०:२७ | उज्यालो सहकर्मी
काठमाण्डाै - मेलम्ची खानेपानी आयोजना नेपालको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो ।
बहुप्रतिक्षित आयोजना हुनुका नाताले मेलम्चीप्रति सबैको चासो र सरोकार रहेको छ । पछिल्लो समय मेलम्ची आयोजना निर्माणको जिम्मा लिएको ठेकेदार कम्पनीले एकतर्फी रुपमा आयोजनास्थल छोडेर हिँडेपछि आयोजनाको निर्माण कार्यमा समस्या देखिएको छ । तर, समग्रमा मेलम्ची आयोजनाको काम लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
गएको शुक्रबार मेलम्ची विकास समितिले सीएमसी कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता तोडेपछि मेलम्चीको पानी काठमाण्डौ आउला त ? भन्ने प्रश्न जन्मिएको छ । तर, खानेपानी मन्त्री बिना मगर, मन्त्रालय र मेलम्ची विकास समितिले सीएमसीसँग नयाँ समझदारी कायम गरेर काममा फर्काउन प्रयास गरिरहेका छन् ।
यो सामग्री यसै विषयमा केन्द्रित छ ।
मेलम्ची आयोजना विश्व बैंकको सहयोगमा काठमाण्डौको खानेपानी व्यवस्थापनका लागि सन् १९७२ मा अध्ययन भएको हो । सन् १९९२ मा स्नो माउण्टेन इन्जिनियरिङ एण्ड कन्सल्ट्यान्टद्वारा सम्भाव्यता अध्ययन भई मेलम्ची नदी डाइभर्सन उत्तम विकल्पका रुपमा पहिचान भएको यस आयोजना कार्यान्वयनका लागि सन् १९९८ मा मेलम्ची खानेपानी विकास समिति गठन भएको थियो । सन् १९९९–२००० मा आयोजनाको विस्तृत डिजाइन प्रतिवेदन तयार भएको आयोजनमा विद्युत उत्पादन तथा रिबर्मा सुन्दरीजल प्रशारण लाइनसहितको प्रस्ताव राखिएको र आयोजनाको तत्कालीन लागत ४६४ मिलियन अमेरिकन डलर रहेको छ ।
आयोजनामा दातृ निकायहरुबीचको तालमेल तथा शर्तहरुको कारण विद्युत तथा प्रशारण लाइन हटाइएको थियो । सन् २००१ मा एसियाली विकास बैंकद्वारा १२० मिलियन अमेरिकी डलर बरावरको लगानी गर्ने गरी ऋण स्वीकृत भएपछि मेलम्ची खानेपानी आयोजना सुरु भएको र कूल लागत अनुमान तत्कालीन अवस्थामा ४६४ मिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ । सन् २००५ मा नोराड, सिडा र विश्व बैंकले ऋण लगानीको प्रतिवद्धता फिर्ता लिएको हुँदा लगानीको अभाव हुन गई आयोजना कार्यान्वयनमा समस्या हुन गएको थियो ।
सन् २००८ सम्म आयोजनाका सहायक कार्यहरु जग्गा अधिग्रहण, पहुँच मार्गहरुको निर्माण, क्याम्प साइट निर्माणलगायतका कार्यहरु सम्पन्न भएको र सन् २००८ पछि मात्र आयोजनाको हेडवर्क्स एवं सुरुङ्ग निर्माणका कार्य सुरु भएको थियो । मेलम्ची आयोजना सन् २००५ मा एसियाली विकास बैंकको ऋण सम्झौताका शर्तहरुअनुसार काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, खानेपानी महशुल निर्धारण आयोग तथा काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड अध्यादेशमार्फत् खडा गरिएको आयोजना हो ।
सन् २००७ मा एसियाली विकास बैंकको ऋण सम्झौताको अवधि समाप्त हुन गएको र त्यसै कारण पुनःसम्झौता हुन नसक्ने अवस्थामा आयोजनालाई सन् २००८ मा पुनर्संरचना गरी सन् २००८ मा आयोजनाको दायरामा केही परिवर्तन गरेर आयोजना पुनर्संरचना गरी दुई भागमा विभाजन गरिएको छ । साथै, लागत अनुमान ३१७ मिलियन अमेरिकी डलर कायम हुन गएको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजना उप–आयोजना–१ को कूल लागत २४९ (संशोधित ३१२ मिलियन अमेरिकन डलर) तथा उप–आयोजना–२ को लागत ६८ मिलियन अमेरिकन डलर रहेको छ ।
सन् २००८ बाट सुरुङ निर्माण कार्यको खरिद प्रक्रिया सुरु गरी जनवरी २००९ मा चाइनिज निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता भई अप्रिल २००९ बाट परिचालन गरिएको तत्कालीन समयमा आयोजना सम्पन्न गरिने म्याद सेप्टेम्बर २०१३ रहेको थियो । निर्माण व्यवसायीबाट ठेक्का सम्झौताको प्रावधानअनुसार (ठेक्का अनुसारको ७८.६५% समय व्यतित हुँदासम्म जम्मा १५.३५% मात्र भौतिक प्रगति गर्न सकेको) निर्माण कार्य गर्न सम्पन्न हुनसक्ने अवस्था नरहेकाले २५ सेप्टेम्वर २०१२ मा ठेक्का सम्झौता रद्द गरिएको थियो ।
मेलम्चीको तत्काल बाँकी रहेको कार्यका लागि खरिद प्रक्रिया सुरु गरिएको र सन् २०१३ को जुलाई १५ मा निर्माण व्यवसायी सीएमसी डि रेभेनासँग सन् २०१६ को सेप्टेम्बर सम्ममा बाँकी कार्य सम्पन्न गर्ने गरी रु. ७ अर्ब ७२ करोड (भ्याट बाहेक) मा ठेक्का सम्झौता भएका थियो । तर, गएको शुक्रबार सीएमसीसँग मेलम्ची बोर्डले आयोजनाको धरौटी रकम जोगाउन ठेक्का सम्झौता तोड्ने निर्णय गर्‍यो ।
चाइनिज निर्माण व्यवसायी चाइना रेलवेबाट ६४१७ मिटर समेत गरी जम्मा २५९२० मिटर सुरुङ खन्ने तथा प्रारम्भिक सपोर्ट लगाउने कार्य गत चैत्र २७ गते ब्रेक–थ्रू भएको छ । हेड वर्क्स निर्माण क्षेत्रमा एक लाख घनमिटर ओपन कट तथा स्लोप स्ट्याबलाइजेशन गर्ने काम सम्पन्न भएको छ । आयोजनाको २५०३५ मिटर सुरुङको भूइँ ढलान गर्ने कार्य सम्पन्न भएको र ८८५ मिटर भूइँ ढलानको काम मात्र बाँकी रहेको छ ।
आयोजनाको २५५१० मिटरमा फाइनल सर्पोट गर्ने काम सम्पन्न भएको र ४१० मिटर मात्र निर्माण कार्य बाँकी रहेको छ । हाइड्रो मेकानिकल उपकरण तथा विभिन्न प्रकारका गेटहरुको आयात तथा केही गेटहरुको जडान कार्यसमेत सम्पन्न भएका छ । हेड वर्क्समा १६०० मिलिमिटर व्यासको ६० मिटर डाइभर्सन पाइप जडानको काम सम्पन्न भएको छ ।
सुन्दरीजल टनेल आउटलेटदेखि बाग्मती नदीसम्मको १००० मिलिमिटर व्यासको २६० मिटर डीआई पाइप जडान कार्य सम्पन्न भएको छ । आयोजनाका तीनवटा भेन्टिलेसन साफ्ट निर्माण गर्ने कार्यमध्ये आम्बाथानको १०७ मिटर पाइलट ड्रील सम्पन्न भएको र रिम गर्ने कार्य ४८ मिटर सम्पन्न भएको छ । सुरुङ अनुगमन प्रणाली जडान, परीक्षण तथा सञ्चालन कार्यको स्टिमेट र डिजाइन तयार गरिएको छ ।
मेलम्चीको पानी प्रशोधन केन्द्र भाग–१ (दैनिक क्षमता ८.५ करोड लिटर) को निर्माण तथा परीक्षण सञ्चालन सम्पन्न । गएको वर्षायाम जुलाइदेखि नोभेम्वरसम्म बाग्मती नदीबाट दैनिक ३ करोड लिटर पानी प्रशोधन गरी वितरण भएको छ । पानी प्रशोधन केन्द्र भाग– २ (दैनिक क्षमता ८.५ करोड लिटर) को ६०% भौतिक (४०४२ घन मिटरसमेत गरी जम्मा ११५०० घनमिटर कंक्रिट तथा ५०५० वर्गमिटर मास कंक्रिट) निर्माण कार्यलाई आगामी मार्च २०१९ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखी काम भएको छ ।
मेलम्ची आयोजना दोस्रो चरण (याङ्ग्री लार्के डाईभर्सन) को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारी कार्य अन्तिम चरणमा रहेको छ । याङ्ग्रीसम्मको प्रवेश मार्ग निर्माण कार्यका लागि निर्माण व्यवसायी परिचालन गरिएको छ । मुआब्जा निर्धारण भई नसकेको, क्षतिपूर्ति निर्धारण तथा वितरण कार्य भइरहेको छ । एसियाली विकास बैंकसँग ऋण सम्झौता भएमा सन् २०१९ भित्रमा खरिद प्रक्रियामा जान सकिने अवस्था रहेको आयोजनाको दावी छ ।
सीएमसी फर्केपछि के–के भयो ?
१५ डिसेम्बर २०१८ मा ठेकेदार कम्पनीले आयोजनाको सम्पूर्ण काम छोडेको थियो । ततपश्चात् १७ डिसेम्बर २०१८ मा मेलम्ची विकास समितिद्वारा ठेकेदार कम्पनीका कार्यसम्पादन जमानत, अग्रीम पेश्की जमानतलगायतका करिब २ अर्ब २१ करोड बराबरको सुरक्षण बापतको रकम मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको नाउँमा जफत गर्नका लागि बैंकमा पत्राचार गरिएको थियो ।
२८ डिसेम्बर २०१८ मा ठेकेदार कम्पनीद्वारा २१ डिसेम्वरमा फिर्ता लिएको पत्रलाई अस्वीकृत गरी ठेक्का तोडेको पत्रलाई पुन स्थापित गरी काममा नफर्कने जानकारी गराएको थियो । त्यसपछि मन्त्री बिना मगरको पहलमा खानेपानी मन्त्रालय, मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले ठेकेदार कम्पनीलाई वार्ताद्वारा समस्याको समाधान खोज्न र काममा फर्कन आग्रह गरेको थियो । ठेकेदार कम्पनीलाई काममा फर्काउन कूटनीतिकलगायतका क्षेत्रबाट निम्नानुसार पहल गरेको थियो ।
तर, ठेकेदार कम्पनीले काममा फर्कन नमानेपछि मेलम्ची विकास समितिले गएको शुक्रबार ठेक्का तोड्ने निर्णय गरेको थियो । मेलम्ची बोर्डले ठेक्का तोड्ने निर्णय गरेपछि आयोजनाको धरौटी रकम रु. २ अर्ब ६५ करोड सरकारको खातामा आउन बाटो खुलेको छ । तर, यही बीचमा सीएमसी कम्पनीलाई नै काममा फर्काउन मन्त्रालय र मेलम्ची बोर्डले वार्ता गरिरहेको छ ।
के सीएमसी फर्किन सम्भव छ ?
खानेपानी मन्त्री बिना मगर सीएमसी कम्पनिलाई नै काममा फर्काउन भरमग्दुर प्रयास गरिरहनु भएको छ । सीएमसी कम्पनीले आयोजनास्थल छोडेर गएपछि उहाँको पहलमा ठेकेदार कम्पनीसँग पटकपटक वार्ता गरिए । ती सबै वार्तामा सम्भव सबै वैधानिक उपायहरुको खोजी गरी काम जारी राख्न उहाँले ठेकेदार कम्पनीलाई आग्रह गर्दै आउनु भएको छ ।
२५ माघमा, जतिबेला मेलम्ची बोर्डले ठेक्का तोड्ने निर्णय गर्दै थियो, त्यतिबेला मन्त्री मगरले पठाएको वार्ता टोलीले सिङ्गापुरमा सीएमसी कम्पनीका प्रतिनिधिसँग वार्ता गर्दै थियो । यता मन्त्रालय र मेलम्ची बोर्डले पनि कानूनी दृष्टिले धरौटी जोगाउन ठेक्का तोड्ने निर्णय गरे पनि सीएमसीसँग सहकार्यको ढोका बन्द नभएको प्रतिक्रिया दिएको थियो ।
आयोजनाको अधिकांश काम सकिएको परिस्थितिमा ठेक्का तोड्दा र नयाँ टेण्डर गर्दा त्यसले लागत बढाउने, कानूनी झमेला आउने, सीएमसीसँग काम गरेका नेपाली कामदार र ढुवानीकर्ताको असहयोग हुने र समयअवधि पनि लम्बिने निश्चित छ । मन्त्री मगरकै भाषामा नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा जानु भनेको मेलम्चीको लागत बढ्नु र आयोजनाको समय लम्बिनु हो ।’ उहाँ त्यसो गर्न चाहनुहुन्न । त्यसकारण सीएमसीलाई नै काममा फर्काउन उहाँले अन्तिम कसरत गरिरहनु भएको छ ।
गएको साता सिङ्गापुरमा सम्पन्न वार्ता सकारात्मक रहेको स्रोतको दाबी छ । मन्त्रालय स्रोत भन्छ, सीएमसीको पनि लागत बढेकाले केही कुरामा नेपाल सरकार लचिलो भइदिओस् भन्ने उनीहरुको चासो छ । हामीले वैधानिक र कानूनी प्रक्रिया हेरेर लचक बन्न सकिने सन्देश दिएका छौँ, वार्ता निकै सकारात्मक भएको छ, सम्भवतः सीएमसी नै काममा फर्किन्छ र यो अन्यौलताको अन्त्य हुन्छ ।’
कानूनविदका अनुसार मेलम्चीको जिम्मा अरु कम्पनीलाई दिँदा नयाँ सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो झण्झटिलो मात्र नभएर लागत रकम पनि ह्वात्तै बढ्छ । समय लम्बिन्छ । अघिल्लो निर्माण कम्पनीको बक्यौताको झमेलाको नैतिक दायित्व पनि सरकार र आयोजनाले लिनुपर्ने हुन्छ । तसर्थ, सीएमसीसँगै नयाँ समझदारी बनाएर काममा फर्काउनु नै बुद्धिमानी हुन्छ ।
उनीहरुका अनुसार सीएमसी फर्काउन कुनै कानूनी जटिलता छैन । दुवै तर्फबाट ठेक्का तोड्ने निर्णय भएको छ । मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘सीएमसी र मेलम्ची बोर्डले ठेक्का तोडेको निर्णय फिर्ता लिनेबित्तिकै सीएमसीलाई काममा फर्काउने कानूनी बाटो खुल्छ । सीएमसीलाई जिम्मा दिँदा नयाँ टेण्डर गर्नुपर्दैन । उनीहरुले उठाएका मागमध्ये कानूनी दृष्टिले मिल्ने मागमा सरकार लचक भए पुग्छ ।’
ठेकेदार कम्पनीले ठेक्का तोडेपछि पनि काममा फर्किएका थुप्रै नजिर भएको पूर्वसचिव भीम उपाध्याय बताउँछन् । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘सिक्टा सिंचाइ आयोजनालगायतका थुप्रै ठाउँमा त्यसो गरिएको छ । सीएमसी नै फर्काउन कानूनी रुपमा कुनै अप्ठ्यारो छैन, खाली दुवै पक्ष मञ्जुर हुनुपर्छ ।’ यी सबै नजिरहरुलाई हेरेर मन्त्री बिना मगर सीएमसी नै फर्काउने अन्तिम कसरतमा लाग्नु भएको छ । सीएमसी नफर्केको परिस्थितिमा मात्र आयोजनाको बाँकी काम सम्पन्न गर्नेबारे मन्त्रिपरिषदमा छलफल हुने मन्त्रालयको दाबी छ ।
-मेलम्ची आयोजना अब कसरी अगाडि बढ्न सक्छ भन्नेबारे खानेपानी मन्त्री बिना मगरको सचिवालयले तयार पारेको सामग्री